कुनै बच्चाको खेल छैन - यो तपाईं सही किबोर्डगार्टन कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ
कसरी सही किबोर्डगार्टन पत्ता लगाउन
ठाउँ आवंटन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईंको गट भावनामा इन्टर्नशिप र भरोसाको लागि अवसर प्रयोग गर्नुहोस्
मोन्टेरीरी, द्विभाषी वा बिरोधजनक विवाहित बालबालिका? सही किबोर्डगार्टन छनौट धेरै आमाबाबुको लागि सजिलो छ। यो आंशिक रूपमा यसको कारण हो कि शैक्षिक अवधारणाहरु को बहुमूल्य कारणले गर्दा आफ्नै बच्चाको लागि सही एक खोज्न गाह्रो छ। अर्कोतर्फ, जर्मनीमा किबोर्डगार्टन छनौट गर्ने अधिकार छ, तर यसको मतलब यो होइन कि इच्छित दिशामा ठाउँ खाली छ।
बच्चाको खेल होइन - यो तपाईं सही किबोर्डगार्टन कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ
त्यसबाहेक, मातृ वा बुबाको रूपमा, तपाईंले मापदण्डलाई थाहा पाउनु पर्दछ जसको द्वारा तपाइँ एक दिन हेरविचार सुविधाको गुणस्तर चिन्न सक्नुहुन्छ।
दायाँ किबोर्डगार्टनका लागि खोजीमा सुरू गर्नुहोस्
दायाँ किरगार्टनको छनौट
यदि तपाईंको बच्चा तीन को उमेर देखि बालबालिका भाग्न को लागी छ भने, दर्ता सामान्यतया जनवरी र मार्च को बीच हुन्छ। अप्रिल सम्म, स्वीकृति वा रद्द पठाइनेछ। निजी वा चर्च प्रायोजित संस्थाहरूको लागि, नगरपालिका बालवालिकाहरूमा भएका अन्तिम म्याद बिभिन्न हुन सक्छ।
तपाईं रूपमा चाँडै सकेसम्म यो पेशामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ किनभने, एक दिन हेरविचार केन्द्र मा तेस्रो जन्मदिन हेरविचार गर्नु अघि आफ्नो बच्चा गरौं थियो, तपाईंले आफ्नो खोज सुरु, तर कम्तिमा प्रारम्भिक काम सुरु गर्नु अघि 12 महिना 15 गर्नुपर्छ।
तथापि, तपाइँ एक सक्रियतापूर्वक एक किबोर्डगार्टन खोज्नु अघि, तपाईंले आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्दा विशेष कुरा के हो भनेर विचार गर्नु पर्छ। यसले तपाईंको बच्चाको चरित्रलाई पनि विचार गर्न भावना बनाउँछ। शर्मीला र आरक्षित बच्चाहरू, जुन पहिले बाहिरको हेरविचारमा सानो अनुभव भएको छ, साना समूहहरूमा स्थायी समूह सम्बद्धता संग राम्रो हातमा छन्।
तपाईंको बालबालिकाको चरित्र सही किबोर्डगार्टन छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ
एक ठूलो अन्वेषण आनन्द, उदाहरणका लागि, एक किंडरगार्टन प्रश्न खुला अवधारणा आउँछ आफ्नो बच्चा देखाउँछ। यसबाहेक, अभिभावकको रूपमा, तपाईंले विचार गर्नु पर्ने कुन शैक्षिक फोकस महत्त्वपूर्ण छ। हरेक बालबालिका आज एक विशेष अवधारणा अनुसार काम गर्दछ। अक्सर संस्था को वेबसाइट मा डिजाइन हेर्न वा रुचि आमाबाबुले डाउनलोड लागि उपलब्ध छ गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै kindergartens शारीरिक गतिविधि वा संगीत शिक्षा मा बढावा गर्न मा फोकस। त्यसबाहेक, त्यहाँ द्विभाषी बालवालिकाहरू छन् वा उनीहरूले शैक्षिक दृष्टिकोण जस्तै मन्टेरी वा वाल्डोर्फ शिक्षामा। धार्मिक शिक्षा र ईसाई मानदण्डहरू र मूल्यहरूको सम्बन्ध मध्यस्थता मानसिक संस्थाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
केवल हरेक राज्य होइन, तर प्रत्येक शहरले कसरी कलेजगार्टन ठाउँहरूलाई सम्मानित गर्नेछ भनेर निर्णय गर्न सक्छ। नगरपालिका संस्थाहरूको लागि, तपाइँ सामान्यतया तपाइँको मनपर्ने बालवालिकालाई दर्ता फारममा संकेत गर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिकता सामान्यतया एकल आमाबाबुका बच्चाहरूलाई दिइन्छ। तथापि, भीडको साइजको आधारमा, यो तपाइँ प्रशासनिक प्राधिकरणहरूमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ जहाँ बस्नुहुन्छ नजिकको अर्को किबोर्डगार्टनमा एक ठाउँ प्रस्ताव गर्न। एक विशेष संस्थामा बाल हेरचाह स्थानमा कुनै कानूनी अधिकार छैन। सबै कि गर्नु आवश्यक छ सुनिश्चित गर्नु सबै ठाउँहरू स्थानमा राख्दा सबै बच्चाहरू खातामा लिइन्छ।
यहां सम्म कि सर्वोत्तम शैक्षणिक अवधारणा पनि कम मूल्य हो यदि कुशल व्यक्ति दैनिक अभ्यास मा यसलाई लागू गर्न मा विफल हुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रश्नमा सुविधाहरू हेर्न प्रत्येक मौका लिनुहोस्। पहलहरूको अग्रिममा एक नोट बनाउनुहोस् जुन तपाईं विशेष गरी रुचि राख्नुहुन्छ र स्थानीय रूपमा सोध्नुहुन्छ। यो जानकारी तपाईंलाई पछि धेरै राम्रो व्यक्तिगत संस्थाहरू तुलना र आफ्नो बच्चाको लागि सबै भन्दा राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
यसैले, व्यक्तिगत सुविधाको वरिपरि हेरेर तपाईका छोराछोरीहरू सँगसँगै लैजानुहोस्: तपाई तुरुन्तै सूचना दिनुहुन्छ कि तपाईको छोरी वा उनको छोरा राम्रोसँग महसुस गर्दछ र एक किबोर्डगार्टनमा स्वागत छ वा होइन। पछिल्लो पहलूले बालवालिकाको छनौटमा सधैं उच्चतम प्राथमिकता पार्यो।
राम्रो किंडरगार्टन तपाईं एउटा अनुकूल वातावरण प्रबल र बच्चाहरु र आमाबाबुले मूल्यांकन संग पूरा भन्ने बताउन सक्छ। शैक्षिक कर्मचारीहरू बीचको कुराकानी पनि समानुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ। एक किबोर्डगार्टनमा राम्रो शैक्षिक कार्यले टीममा काम गर्ने सहयोगको दायरामा निर्भर गर्दछ।
त्यो भनिएको छ, पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण छ। एउटा संस्था जसमा तपाईंको बच्चाको हेरचाह गरिएको छ तपाईंको साथ शैक्षिक साझेदारीमा प्रवेश गर्दछ। यसको मतलब, आमाबाबुको रूपमा, तपाईं बालबालिकाको साथ राम्रोसँग सहयोग गर्न र आफ्नो बच्चाको विकासलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। त्यसैले सम्भावनाहरूको बारेमा सोध्नुहोस्, कसरी आमाबाबुले बालबालिका रोजगारीको जीवनमा योगदान दिन सक्छन् र सूचना र सूचना पर्चीमा तपाईंको भ्रमणको साथ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
अन्तिम तर कम से कम, एक किबोर्डगार्टन को उपकरण असाधारण छैन। यो सधैँ नवीनतम फर्नीचर हुनुपर्दैन, तर राम्रो-रखरखाव र कार्यात्मक इन्टरनेट केवल pedagogically सार्थक खिलौने रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। निर्माणको अतिरिक्त। क्राफ्टिंग र निर्माण सामग्री बोर्ड गेमहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ, साथसाथै भूमिका, चित्र पुस्तकहरू र खेल सामग्री भूमिका-खेल खेलहरूको लागि।
तीन वर्ष पुरानो सम्झना गर्न हुँदैन पूर्वप्राथमिक छोराछोरी, उमेर उपयुक्त प्ले र सिक्ने अवसर भन्दा फरक आवश्यकता छ, तपाईँ हेर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। साथै, पत्ता लगाउनुहोस् कि प्रत्येक विद्यालयमा पूर्वस्वास्थ्य कार्य कस्तो देखिन्छ? एकाग्रता, बोली र लेखन अधिग्रहण, आत्म-संगठन र क्षेत्रमा संज्ञानात्मक विकास क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोष अवसर हो।
राम्रो किंडरगार्टन मा आफ्नो सबै प्रश्नहरु धैर्य र विस्तार जवाफ हुनुपर्छ। यदि यो मामला छैन, तपाईं राम्रो देख राख्न चाहन्छु: राम्रो बाल हेरविचार सबै दल बच्चा को हित मा काम भने मात्र काम गर्न सक्छन् र तपाईं जस्तै आमाबाबुले रूपमा किंडरगार्टन रूपमा एक संस्थाले आत्मविश्वास निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी सही ब्रा खोज्छु महिला महिला
बच्चाहरु को लागि गल्ती - मतभेदहरु खोज्नुहोस
सौन्दर्य - के त्यो धारक को आँखा मा छ?
कुन प्रेम प्रकार तपाईं हो?
बालबालिकाको दाना शिक्षक
साथीहरु - भगवान को लागि फैशन
पर्वतमा अवकाश | छुट्टियाँ यात्रा